Ndira 2018 - Network maRadio
musha / 2018 / Ndira
Mwedzi: January 2018
Nyowani Echolink yakaburitsirwa Inrico TM-7 uye mamwe ma network redhiyo
Dhawunirodha iyo nyowani Echolink vhezheni! Inoshanda zvikuru ne Inrico TM-7. Iko PTT bhatani mashandiro akawedzerwa uye iyo skrini UI yakagadziridzwa kuti ikwane izvo chaizvo zvinodiwa zve Inrico TM-7.
Miedzo yakaitwa ne Talkpod N58, Radio-Tone RT4, uye zviri pachena, ne TM-7. Ose maredhiyo eneti anofanirwa kushanda mushe neiyi Echolink vhezheni, kusanganisira iyo Chokwadi F22 +, F25, Inrico T298s uye zvakare chitsva Inrico T320.
Kana iwe uchida kumhanya Echolink uye Zello panguva imwe chete, ndapota verenga ichi.
Tarisa vhidhiyo iri pasi apa:
Iyo nyowani 4G Radio kubva kuInrico yaburitswa
The itsva Inrico T320 ikozvino kutumira. Iyo inopa 4G LTE uye ndiyo yekutanga Android 7.0 yakavakirwa network redhiyo ine 80-awa kumira-nenguva! Vanoziva zvavari kuita. 3000 mauniti akagadzirira kutumira. Unoda imwe here? Tora ikozvino!
RT4 - Taura sezvakanaka
Nemhando yepamusoro mutauri maikorofoni, unogona kushandisa iyo Radio-Tone RT4 kunge pro chaiye. Iyo maikorofoni inouya kunyange ne3.5mm socket kuti ubatanidzwe kune imwe nzeve.
TheRadio-Tone RT4 ndiyo mamiriro-e-iyo-art mu Android POC Radio. Iyo RT4 ine simba kwazvo Motorola-dhizaini redhiyo, ine inogara 4600mAh bhatiri
F22 muZhizha & RT4 muZima
PTT4U inyika-ye-ye-iyo-network network sevhisi sevhisi yehunyanzvi.
Kuvimba nechiratidzo cheGSM, mawairesi edu achakwanisa kutaura kune mumwe nemumwe pasina chero ganhuriro. Radiyo yega yega inoshanda neSIM kadhi (isina kubatanidzwa) uye inoshandisa GSM / 3G / 4G uye mamwe mamodheru anotoshanda neiyo WiFi chiratidzo Izvi zvinoreva haufanire kushandisa mari yakawanda pane anodhura redhiyo infra-zvivakwa, anodzokorora, maantena kana saiti renzvimbo. Yese network network infra-chimiro chinopihwa neye GSM inotakura.
Yakavanzika uye yeboka mafoni anowanikwa. Nhengo dzako dzechikwata dzinogona kunge dziri munyika dzakasiyana uye dzichiri kusvika. Mushandisi wega wega anogona kutarisa nzvimbo yemumwe nemumwe (zvichibva paprofile yavo), tumira mameseji uye SOS yambiro.
Zvese zvaunoda kuti uite, kutenga maratidziro enetiweki, zvinoenderana nezvaunoda, isa yako yaunofarira mutakuri SIM kadhi pamawairesi (chirongwa chepamwedzi che data che500MB chinokwana) uye Nyorera gore rega PTT4U sevhisi. Iwe unozoda gore rimwe chete $ 49 kunyoreswa kune imwe nhepfenyuro. Uye ndizvozvo! Hapasisina kutemwa nemusoro.
Radio-Tone RT4 ine musana APRS mashandiro
Inoshanda APRS neakakurumbira Radio-Tone RT4 hazvigone kuve nyore. Iyo yakakwira-inonzwisisika GPS kanyanga uye nenzvimbo ye GSM shongwe pasi rese ichakuchengetedza iwe kutarisa nzvimbo yako kunetiweki. Ingoisa APRSDroid kubva kuGoogle chitoro uye tarisa zvese zviitiko zve ham paunenge uchienda. Ita kuti shamwari dzako dzizive kwauri, kumhanya kwako, kukwirisa uye kunanga.
Mikana yeiyo RT4 haaperi. Uye newe? Uri kutamba netiweki maredhiyo here?
5 Zvinhu zvaunogona kuita neInrico TM-7 Transceiver
Pane zvinhu zvakawanda kwazvo zvaunogona kuita ne Inrico TM-7. Zvese zvaunoda ndeye GSM kana WiFi kubatana.
DMR Hotspot Kudzora
Unogona kuisa BlueDV uye shandisa yako Inrico TM-7 kudzora a DVMega hotspot.
Kuwedzera uzere APRS kugona chidimbu chekeke. Ingo isa APRSDroid kune yako TM-7 uye govana nzvimbo yako munguva chaiyo.
Uchishandisa Echolink netiweki redhiyo ino vhura nyika kwauri. Sarudza chero chinongedzo kana zviripo misangano. Iva neQSOs pese paunoda. 24/7!
Imwe yedzinonyanya kufarirwa modes ine TM-7. IRN inzvimbo inonakidza inobatanidza hams kune mazhinji network, seAllstar, Echolink uye DMR.
Isa iyo yemahara app Broadcastify uye shandura yako TM-7 mune yepasirose scanner inogamuchira mapurisa, dhipatimendi remoto, ATC nekumwe kutaurirana kwevashandi veveruzhinji.
Raira yako Inrico TM-7 nhasi!
Inrico TM-7 kubva kuNewcastle (UK) kuenda Seattle (US) neMI6SSZ
Vamwe vanhu vangati inokudzwa mbozhanhare yakasarudzika zvakanaka kusvikira iwe warova zvidzokororo uye iwe unofanirwa kuve unokwanisa ham op kuishandisa
Chinhu chakanaka chakarongedzwa zvakanaka chakavakwa zviri nyore kutakurika enda kumhepo chero kupi zvako pasi neiyo GPS kanyanga saka hapana chikonzero chekufunganya nezve kana uine chiratidzo
Kana iwe uchingobvumidzwa kwazvo kuisa iyo kanyanga kwaunogara senge mune furati saka izvi zvakanaka
Iyo skrini inogona kuita kuti ive yakati kurei kunze kweiyo inopenya ingori imwe yeaya mawairesi aunofanirwa kuve nawo
Kana zviri zvechitoro SOUND OF ANGELS tsime sevhisi iri pachena uye vanokuchengeta iwe uchifambira mberi pakufambira mberi kweodha yako ini ndakawana yangu mu7 / 9 mazuva ekushanda
Inobatsira kwazvo munzira dzese dzinogoneka uye kunyangwe iwo mapositi anorema mumutengo asi iri DHL saka uchaiwana sezvavanokuchengeta uchiudzwa kubva pakutanga kusvika pakupedzisira
Ndiri kufara nazvo uye ini ndiri ham radio op kune nyika nyowani yekuwana neiri redhiyo kungoiwana kwavo kana uchinge uinayo uye zvese zvakuvhurirwa iwe
muenzaniso wekukurumidza muUK wakamira pasupamaketi muNewcastle paTyne uchitaura nemumwe munhu muSeattle hapana swr hapana antenna tuners hapana hombe Ariel ingori diki diki bhokisi riri padashboard saizi yebhokisi rematch.
Zvakanaka ipapo tine basa rakakura kubva kuchitoro yakanaka radio inoshanda zvakanaka
Alex MI6SSZ PANE ZELLO
Verenga zvakawanda pamusoro Inrico TM-7